Anker PowerCore 5K Famerenana bateria andriamby | Vaovao IPhone
louis padilla | | Fitaovana IPhone, maro
Notsapainay ny bateria ivelany MagSafe mifanentana, Anker PowerCore 5K, safidy tsara indrindra amin'ny bateria MagSafe an'ny Apple, manana fahaiza-manao lehibe kokoa noho izany ary koa ho an'ny ampahatelon'ny vidiny.
Na eo aza ny fanatsarana ny batterie an'ny iPhone, ny fampiasana bateria ivelany dia mbola ilaina amin'ny fotoana maro. Saika ilaina amin'ny iPhone Mini, atolotra ho an'ny mahazatra sy Pro, ary indraindray ilaina ho an'ny Pro Max, ny fanananao fitaovana manome antoka fa haharitra hatramin'ny faran'ny andro ny batterinao iPhone na dia amin'ny fampiasana faran'izay mahery aza dia afaka mamonjy anao «fiainana» matetika. Ary miaraka amin'ny fisian'ny rafitra MagSafe bateria kely izay mifamatotra amin'ny iPhone miaraka aminao dia iray amin'ireo loharano tsara indrindra. Apple dia manana ny bateriny MagSafe manokana, izay dinihinay amin'ity rohy ity, saingy tsy an-tsena ho an'ny maro ny vidiny. Androany dia nisedra ny bateria Anker PowerCore 5K izahay, izay ampahefatry ny vidiny dia manome antsika fahaiza-manao lehibe sy fampisehoana mitovy amin'izany.
1 Design endrika
2 Fahasamihafana amin'ny Apple
Ny endriny no antenainao amin'ny bateria ivelany, tsy misy zavatra tsy mahazatra. Vita amin'ny plastika misy tampon-slip, tsy misy afa-tsy amin'ny mainty izy io, na dia hisy hafa ao amin'ny katalaogara aza. Ny habeny dia mitovy amin'ny an'ny bateria MagSafe an'i Apple, na dia somary matevina kokoa aza. Ny lanjany dia 133 grama, tsy hanana olana kely akory ianao amin'ny hitondrana azy ao anaty paosy, kitapo na kitapo misy kitapo isan'andro hampiasana azy isaky ny mila izany ianao.
Izy io dia manana fifandraisana USB-C, izay ampiasaina hamerenana indray (adiny roa sy sasany eo ho eo hamehezana tanteraka) ary hiampangana fitaovana hafa amin'ny alàlan'ny tariby. Raha mampiasa an'ity safidy ity ianao dia 10W ny herinaratra famahanana. Mazava ho azy fa mifanentana amin'ny MagSafe, koa dia charger tsy misy tariby, fa amin'ity tranga ity miaraka amin'ny herin'ny 5W (mitovy amin'ny batterin'i MagSafe an'ny Apple). Midika izany fa miadana, somary miadana ny famoahana indray. Ireo fetra ireo dia apetraka ho fepetra fiarovana mba tsy hanimba ny batterie iPhone amin'ny hafanana be loatra. Tsy bateria ny fampidirana vola haingana ny iPhone-nao, anao ny mamela azy io raha mbola mila izany ianao mba hiverenan'ny batterie tsikelikely.
Ny fihazonana dia matanjaka amin'ny rafitra MagSafe, na dia toy ny amin'ireo kojakoja rehetra nanandramako aza, tsara kokoa rehefa tonta toy izay tsy misy azy io. Raha tsy misy fonony dia mihodina ny batterie, ary amin'ny alàlan'ny fikasihan-tanana dia afaka mitokana izy. Rehefa manao tranga ianao (mifanaraka amin'ny MagSafe) dia mihamatanjaka kokoa ny fihazonanaMahatsiaro ho milamina kokoa ny zava-drehetra ary azonao atao ny mamoaka ilay iPhone eo am-paosinao amin'ilay tranga nefa tsy hatahotra ny hivoahany ianao (raha mbola tsy manao pataloha jeans tery ianao, mazava ho azy). Ny fikirakirana ny iPhone amin'ny alàlan'ny bateria dia somary ahazoana aina, tsy olana lehibe io, indrindra raha raisintsika fa ny tanjona dia ny tsy ho lany bateria.
Fahasamihafana amin'ny Apple
Ny fahaizan'ny batterie, araky ny anarany dia 5.000mAh. Mihoatra noho ny fahafaha-mameno ny famerenana tanteraka ny mini-iPhone 12 ary hanana zavatra ambiny ianao, azonao atao ny mameno ny 12 sy 12 mini, ary hijanona amin'ny 70% mihoatra na latsaka amin'ny iPhone 12 Pro Max ianao. Tsy isalasalana fa mahavita kokoa noho ny batterie Apple tany am-boalohany izy, na dia averinay aza, somary lehibe kokoa.
Izy io dia manana LED maromaro izay manondro ny haavon'ny bateria sisa tavela, zavatra malahelo be ahy ao amin'ny baterin'i Apple. Tsindrio ny bokotra herinaratra ary zahao hoe ohatrinona ny sarany sisa tavela amin'ny bateria, zavatra izay azonao atao amin'ny Apple fa tsy azonao atao raha mampifandray ilay bateria amin'ny iPhone ianao. Ankoatr'izay, io bokotra herinaratra io dia mifehy ny famerenana indray ny iPhone. Tsy batterie "place and recharge" izy io, azonao apetraka ao amin'ny iPhone-nao fa tsy recharge raha irinao. Ity antsipiriany kely ity dia ho an'ny zavatra lehibe sasany, miahiahy ny famerenan'ny iPhone azy ireo raha tsy afaka manao na inona na inona izy ireo ... eny, afaka nanala ny bateria foana izy ireo ary dia izay.
Ny batterie Anker PowerCore Magnetic 5K dia manome antsika fahafaha-mitrandraka feno ho an'ny ankamaroan'ny maodelin'ny iPhone manana habe be dia be. Na dia miadana aza ny haingam-pandeha (5W), ny mety hampiasa tariby hamerenana ireo fitaovana hafa, ny LED mitondra ny bokotra ary ny bokotra herinaratra dia singa manavaka azy amin'ny bateria Apple ofisialy, ary raha ampiantsika amin'izany ny vidiny dia 39 € fotsiny any Amazon (rohy), dia safidy tsara indrindra ho an'ireo izay maniry backup ho an'ny iPhone amin'ireo andro mitaky be loatra rehefa voahidy fatratra ny bateria.
PowerCore Magnetika 5K
LED hilazana ny bateria sisa tavela
USB-C ho an'ny famerenana amin'ny laoniny ny tariby
5.000 mAh fahafaha-manao
5W herinaratra amin'ny famahanana tsy misy tariby
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Fitaovana IPhone » Famerenana bateria andriamby Anker PowerCore 5K